Martsa 31, 2010 amin'ny 11:53 aho
Hi, isika mampiasa ny plugin eo amin'ny toerana, ary tena faly ny vokatra. Na izany aza dia te-hanolotra ny mpitsidika ny fahafahana handika sy mijery ny toerana amin'ny Scots fiteny sy manontany tena raha azo atao ary inona no sarotra eo amin'ny fanampiana ny teny fanampiny?
Ny fanampiana / feedback no tena ankasitrahana. Thanks for the great plugin 🙂
Martsa 31, 2010 amin'ny 1:40 am
Fotsiny ianao mila manampy iray andalana ho amin'ny teny voaomana ao amin'ny constants rakitra, mirary anao ho tsara vintana
Jona 18, 2010 amin'ny 3:38 am
Misaotra ny Info sy miala tsiny noho ny tara valin-.
Aho hanome azy ho Mandehana ary aoka anao hahafantatra ny fomba azoko tamin'ny. Mamerina ny fisaorana anao, still an excellent plugin 😉
Aprily 1, 2010 amin'ny 4:36 am
Very good 🙂 One more function, Nahoana raha manampy an anaram-boninahitra, sasany identifers ny fiteny… tsy fantatro… satria Google webmastertools mampiseho ity hafatra ity:
Missing lohateny marika 0
Lohateny mitovy marika 1,139
Long lohateny marika 0
Short lohateny marika 0
Non-javatra lohateny Tags 0
Dika mitovy lohateny marika Dia kely ny olana, but problem 🙂
Aprily 16, 2010 amin'ny 6:13 am
Afaka mpandrindra valio ho ny fanehoan-kevitra? 🙂
Aprily 16, 2010 amin'ny 7:23 am
Title marika sy Meta Tags ihany koa nadika, na dia tsy manana ny frontend interface tsara, izany dia rehefa niasa tamin'ny. Amin'izao fotoana izao – fomba haingana hatao raikitra izany dia ny hametraka ny teny ampiasainao eo amin'ny anaram-boninahitra na aiza na aiza ao amin'ny lahatsoratra (even a private one) and let the translation engine fix this.
Daniel True milaza
Aprily 4, 2010 amin'ny 4:54 am
Misaotra; Tohizo ny asa tsara!